Ederede Harrison Painter na Martech Zone |
Edemede site na Onye na-ese Harrison
Onye na-ese Harrison
Harrison VP nke Business Development maka DK New Media. Ọ bụ onye ọchụnta ego na onye okike na-azụ ahịa nke nwere ụlọ ọrụ ahịa ya abụọ enwetara, otu na nzuzo na nke ọha. Harrison bukwara onye nlere vidiyo na onye nduzi, na-eweta nka ahu n'ogige ya tinyere ihe ndi ozo anyi na acho. Ochicho ya bu ihe banyere iwulite mmekorita na ichota mmekorita nke na-eleba anya na ike nke mmekorita, ihe ohuru, na mmegha ahia.
Ọbịbịa nke Ahịa Imirikiti, Akwụkwọ akụkọ, na Mmụta
Wenezdee, Machị 8, 2017 Onye na-ese Harrison
Eziokwu na-abawanye ụba ga-arụ ọrụ ka ukwuu n'ọdịnihu gị. TechCrunch buru amụma na mobile AR ga-abụrịrị $ 100 ijeri ahịa n'ime afọ 4! Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ teknụzụ na-egbu egbu, ma ọ bụ na ụlọ ngosi ihe na-ere arịa ụlọ ọrụ, azụmahịa gị ga-erite uru n'ụzọ ụfọdụ site na ahụmịhe ahịa miri emi. Kedu ihe dị iche na VR na AR? Eziokwu Virtual (VR) bụ ntụrụndụ dijitalụ nke
Ebumnuche 3 iji gbasaa iru ahịa na vidiyo
Monday, December 5, 2016 Sunday, Jenụwarị 15, 2017 Onye na-ese Harrison
Vidio bụ otu n’ime ngwa ahịa azụmaahịa kachasị ike na ngwa agha gị iji gbasaa iru ahịa, mana a na-eleghara ya anya, na-emezighị ya na / ma ọ bụ ghọtahiere ya. Enweghị mgbagha na mmepụta ọdịnaya vidiyo na-eyi egwu. Akụrụngwa nwere ike ịdị oke ọnụ; usoro nhazi ahụ na-ewe oge, na ịchọta obi ike n'ihu igwefoto anaghị adị mfe mgbe niile. Obi dị anyị ụtọ na anyị nwere ọtụtụ nhọrọ dị taa iji nyere aka imeri nsogbu ndị a. Kacha ọhụrụ smartphones na-enye 4K video, edezi